Xog: Axmed Madoobe iyo Gaas oo wada qorsho lid ku ah DF aasaasna u ah 5 qodob - Caasimada Online
Home Warar Xog: Axmed Madoobe iyo Gaas oo wada qorsho lid ku ah DF...
Xog: Axmed Madoobe iyo Gaas oo wada qorsho lid ku ah DF aasaasna u ah 5 qodob
Muqdisho (Caasimada Online)-Sida aan wararkeena hore ku sheegnay waxa uu Khilaaf Siyaasadeed xiligaani ka dhextaagan yahay Dowlada Federaalka ah ee Somalia iyo Maamul Goboleedyada Jubbaland iyo Puntland.
Khilaafka Dowlada iyo Maamul Goboleedyada aan kor kusoo xusnay ayaa xoogeystay kadib markii labada maamul Goboleed ay qaadaceen go’aan ay dowlada Somalia ku qabsatay dhaqaale xoogan oo Imaaraadka Carabta ay dooneysay in dalka ay kasoo galiso dhanka Garoonka Aadan Cadde, taa oo gashay gacanta Hay’adda NISA.
Hogaamiyayaasha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Puntland C/weli Gaas oo ka duulaaya go’aanada Dowlada ayaa sheegay inaanu aqbaleynin in dowlada Somalia ay kaligeeda ku dhaqaaqdo go’aan latashi la’aan ah.
Madoobe iyo Gaas, ayaa wixii intaa ka danbeeyay bilaabay aasaaska xulafo kasoo horjeeda Dowlada Somalia oo lagu eedeeyay inay ka weecatay la dhaqanka Dowlada Imaaraadka Carabta.
QODOBADA AASAASKA U AH ISBAHEYSIGA AY DHISAYAAN LABADA HOGAAMIYE AYAA KALA AH:
1-Is hortaaga qorshooyinka Dowlada Federaalka oo dhan waliba ah.
2-Khilaaf u abuurida Dowlada Federaalka iyo Xildhibaanada Baarlamaanka, iyadoo la fulinaaya rabitaanka Dowlada Imaaraadka.
3-Kala ququbida Dowlada iyo Shacbkeeda, iyadoo laga shaqeynaayo muujinta ciladaha yaryar ee dowlada, sida uu qorshuhu yahay.
4-Adeegsiga warbaahinta xorta ah si dowlada loo dareensiiyo xiisada ay abuureyso Imaaraadka oo khilaaf kala dhexeeya.
5-In shacbiga laga jeediyo Nabadda iyo Midnimada, isla markaana loo jiheeyo jihooyin kale oo mugdi galinaaya xasiloonida dalka.